सी’के राउतको देशवि’रुद्ध फेरि वि’ष व*मन, ‘नेपाल’ नाम प्रती नै आ*पत्ति! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सी’के राउतको देशवि’रुद्ध फेरि वि’ष व*मन, ‘नेपाल’ नाम प्रती नै आ*पत्ति!
देश वि**खण्डनको आ**पराधिक सोच प’रित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएको दाबी गरिएका सीके राउतले एकपटक फेरि देशविरुद्ध विष वमन गरेका छन् । राउतलाई नेपाल भन्ने नामसँग नै यति वैरभाव देखियो कि शहरको नाम नेपालगञ्ज राखेकोमा समेत उनले चरम आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।
बाँके जिल्लाको हाल नेपालगञ्ज भनिएको स्थानमा पहिले खासै मानवबस्ती थिएन । जंगबहादुर राणाको समयमा बाँकेमा बडाहाकिम रहेका लेफ्निेन्ट कर्णेल सिद्धिमान राजभण्डारीले नेपालगञ्ज नामाकरण गरी त्यहाँ बस्ती बसाएका थिए । राजभण्डारीको यही कामबाट प्रसन्न भएर जंगले वि.सं. १९१८ मा उनलाई कर्णेल बनाइदिएका थिए ।
सुगौली सन्धिका कारण गुमेको भूभागमध्ये बाँके र त्यसदेखि पश्चिमको केही भूभाग जंगबहादुरको कूटनीतिक प्रयासबाट वि.सं. १९१६ मा नेपालले फिर्ता पाएको थियो । नेपालको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर, सीके राउतले नेपालगञ्ज नेपालको स्वामित्वमा नभएको र नहुनुपर्ने आशयको गम्भीर आ**पत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘एमसीसी अनुदान सम्झौता’लाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सीके राउतले नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनमा अनेक झमेला पैदा भएसँगै सी**के राउतको नेपालप्रति आक्रोश पुनः उत्पन्न हुनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने टुल्सको रूपमा ‘स्थापित’ गरिएका राउतको भूमिकालाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले थप सङ्कट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना फेरि पनि देखिएको छ ।
Previous ‘शनी दे’वको दर्शन गर्दै आज – १० फाल्गुण २०७६ शनिवार को राशिफल हेरौं!’
Next जान्नुहोस् , कु’न भागमा टा’उको दुख्नु के रोगको संकेत ?’